Vacuum Kukanda | Urethane Kukanda | Zvidimbu zvepurasitiki Zvikamu - Gadziraproto - Gadziraproto Tech Co, Ltd.
SERVICE / Vacuum Kukanda
GadziraProto, pamucheto unotungamira wekutsvaira tekinoroji, inogona kugadzira silicone iraba mafuru inogadzira urethane cast zvikamu nekukurumidza uye nenzira kwayo. Kanda urethane kuburikidza nemaitiro aya akakosha kuyedza pre-yekugadzira zvikamu, mashandiro, uye dhizaini yekuongorora.
Kurumidza Kupfupisa-Kumhanyisa Kugadzira Sarudzo: Diki Batch epurasitiki Prototypes
GadziraProto yekutsvaira tekinoroji tekinoroji inopa zvakasiyana siyana zvigadzirwa kuti zviitise kugadzirwa kwezvakakandirwa urethane zvikamu, zvakajairwa zveanoshanda bvunzo, pre-kugadzirwa ongororo uye yakaderera vhoriyamu kugadzirwa. Simbi urethane zvikamu zvinokurumidza uye zvisingadhuri pasina chikonzero chekudyara chero simbi yekushandisa kana zviyero zvichingova gumi nemazana mapfupi ekumhanya, uye zvinogona kuendeswa mukati memavhiki muzviitiko zvakawanda.
Vacuum Kudzingwa (inozivikanwawo se polyurethane kukanda) inogona kushandiswa kunyatsoteedzera yekupedzisira jekiseni rakaumbwa zvikamu kana zvigadzirwa zvakapedzwa. Kazhinji, kuumbwa kunoitwa kubva kune silicone rabha uye kushandisa iyo CNC kana SLA chikamu senge tenzi pateni. Izvi zvinoumba zvakapetwa uye zvinyorwa uye zvinopa zvinoenderana zvinopedzisa kubva kune chimwe chikamu kuenda pane chinotevera. Iwe unogona kuwana yekugadzira-senge mhedzisiro inosanganisira echimakanika maitiro, mavara, uye magumo.
Iine makore makumi maviri 'ruzivo, timu yePeopleproto nyanzvi inopa yakanakisa yekukanda sevhisi kune yakaderera vhoriyamu epurasitiki prototypes, uye inokubatsira iwe kurova chaiyo muyero pakati yepamusoro-soro, magumo-ekushandisa zvikamu uye yekugadzira lead-nguva. Tsvaga rumwe ruzivo nezveyedu yekukanda michina, unogona kukumbira mutengo ipapo.
Kugadzira Master Pattens yeUrethane Kukanda
Hunhu hwezvikamu zvekukanda zvinoonekwa nehunhu hwetenzi pateni, uye mazhinji evatenzi masters anogadzirwa neCNC kana iwe uchida kubata kushivirira kwakasimba senge +/- 0.05mm. Uye zvakare, isu zvakare tichafunga nezvekugadzira iyo tenzi neSLA kune izvo zvikamu zvine zvimiro zvakaoma. CNC muchina inotora nguva yakareba uye inodhura zvakanyanya kuita iyo tenzi, nepo SLA inogona kuburitsa masters nekukurumidza, uye inogona kuve nechokwadi chegungano maficha ekuumba nenzira kwayo uye nemazvo.
Huwandu hwemasters hwakavakirwa pahuwandu hwakazara hwekukanda zvikamu zvinodiwa pakupedzisira. Kana iyo yekukanda yakawanda ingori zvidimbu zvakati wandei, ipapo tenzi mumwe anokwana, nepo kana huwandu hwacho hwadarika zvidimbu makumi matatu, mukufunga nguva yekuendesa, tichaita 1-2 masters kuitira kuti tigone kugadzira mamwe masilicone maforoni ekuita zvikamu zvekukanda. nekukurumidza.
Kana izvo zvinodiwa nemutengi zvasvika pakushivirira kwakanyanya, kupenya kwakapenya kana kunyange zvikamu zvakajeka, tenzi patani ichagadzirwa nemuchina weCCC uyo unoratidzwa neakanyanya kujekesa machining uye yepamusoro yepamusoro kupera.
Izvo zvine hunyanzvi dzakakwenenzverwa zvikamu zvichave zvinopenya kupenya uye kujeka kwemaziso. Zvichakadaro, isu zvakare tinogona kupenda matenga ekumusoro ekugadzira kana satin maitiro ekuteedzera yekupedzisira muforoma mameseji echigadzirwa. Iyo silicone molds inoteedzera iyo zvinyorwa uye zvinyorwa kubva kuna tenzi wepakutanga, saka zvikamu zvekukanda zvichabuda zvakafanana nashe pasina chero imwe yekupedzisira pamusoro.
Silicone Rubber Mould Kugadzira
Iyo silicone rabha muforoma (inozivikanwawo seRTV muforoma) inogadzirwa zvichienderana neatenzi pateni. Iyo makemikari kugadzikana, kuzvisunungura zvinhu uye kushanduka kwesilicone rabha zvakanakisa kuti zvinopa kushomeka kushomeka uye zvinotakura zvakanakisa ruzivo zvinobudirira kubva kuna tenzi kuenda kuforoma.
Hupenyu hwesilicone muforoma hune hukama zvakananga nekuoma kwechikamu chekukanda. Kazhinji, inoburitsa zvidimbu gumi nemaviri kusvika gumi kusati kwashatiswa. Kana chimiro chechikamu chiri nyore, fomu imwe ingangokwanisa kukanda zvikamu makumi maviri; nepo kana chikamu chacho chichida mhando yepamusoro senge chakajeka chikamu chakaomarara, muforoma imwe inogona kungoita zvikamu gumi nezviviri kana kunyange gumi zvekukanda.
Matanho ekugadzira iyo Silicone Rubber Mould
Iyo tenzi inoda kusunganidzwa nemamwe mafirimu matete kuti iite nyore nyore kutemwa, inozoita seamsera yeiyo yekupedzisira muforoma.
Iyo tenzi modhi inomiswa mubhokisi riine magedhi nemhepo yakabatanidzwa; risers inoiswa pachikamu kuti mweya ubude kubva muforoma yekupedzisira.
Silicone inodururwa yakatenderedza tenzi uye vhoriyamu inoshandiswa kubvisa mweya wese. Izvi zvinobva zvaporeswa muchoto, panopisa 40 ℃. Kazhinji zvinotora maawa masere kusvika gumi nematanhatu zvichienderana nevhoriyamu yeforoma.
Kamwe iyo silicone rabha yaporeswa, bhokisi uye risers zvinobviswa; sezvo tenzi achibviswa kubva kusilicone kuti aumbe mhango, silicone rabha muforoma inogadzirwa.
Polyurethane Kukanda Maitiro Detail
Polyurethane kukanda kunogona kunyatsoenderana vatengi 'Specification, zvisinei ruvara, unaku uye vaima kumugumo, pinza uye pamusoro Kuumbwa, kana kunyange optically zvakajeka.
GadziraProto akaenzana mashandiro enzira anovimbisa chaiyo chikamu kudzokorora uye inowirirana mechimiro zvivakwa. Kukanda kwedu mahunyanzvi kudzora ese anoshanda parameter: kusanganisa, de-gassing, inomutsa, preheating, kukanda uye de-kuumba, ichibvumidza padyo-akakwana makopi eatenzi pateni kuti igadzirwe, uye ichipa yakajairwa shiviriro pane ± 0.15mm / 100mm, neiyo yepamusoro chaiyo inogona kusvika ± 0.05 mm.
Matanho kuUrethane Kukanda Maitiro
Chekutanga-chikamu gadziriro, iyo silicone chakuvhuvhu inoiswa muchoto uye inopisa kusvika 60 ° C-70 ° C.
Unganidza chakuvhuvhu usati wakanda iyo polyurethane. Kusarudza chairo muforoma-kuburitsa mumiririri (uye kuishandisa nemazvo) kwakakosha kudzivirira kunamira uye kuremara kwepamusoro.
Gadzirira iyo polyurethane resin kuti preheat iyo kusvika 40 ° C usati washandisa. Sanganisa maviri-zvinoriumba resin zvakanyatsoenzana, uye wozadza zvizere nekumhanyisa uye madigas kwemakumi mashanu-60 masekondi pasi pevhavha.
Iyo resin inodururwa muforoma mukati meiyo vacuum kamuri iri pasi pecomputer control, uye inorapwa zvakare muchoto. Avhareji yekurapa nguva: 1-3 maawa ezvidiki zvidimbu uye 3-6 maawa ezvikamu zvikuru.
Bvisa iro resini chikamu kubva kune silicone mold mushure mekuporeswa. Bvisa magedhi nemhepo; siya kopi chaiyo yekutanga.
Gadzirira kudzokorora uku kutenderera.
Gadzira Cast Urethane Zvikamu Nemhando dzakasiyana-siyana dze Resin Zvishandiso
Urethane resin mapolymers ane akasiyana siyana masimba, simba, uye mashandisiro. Urethanes inogona kuomarara, elastomeric, mavara, akajeka, akapendwa uye akafukidzwa. Zvishandiso zvinonyanya kugadziridzwa kutevedzera zvakajairika zvigadzirwa zvepurasitiki.
CreateProto inopa zvinhu zvakasiyana siyana kusangana nezvako, kusanganisira Hei-Cast anobva kuJapan uye Axson anobva kuFrance. Zvishandiso zvine zvimwe zvinhu zvakafanana neinjiniya yekugadzira mapurasitiki, akadai seABS, PMMA, PC, PP, PA, zvichingodaro. Kukanda zvikamu kunogona kuve kwakasiyana kubva kune yakajeka, inochinja kuenda kune yakajeka uye kubva kune yakapfava rabha kune yakaoma plastiki. Zvinhu zvakasiyana-siyana zvine izvo zvinodzivirira kusagadzikana, kwakanyanya kupisa tembiricha (120 ℃) ​​kana moto unodzivirira (UL94-V0), uye girazi rakazadzwa resini uye kuomarara kwakasiyana kwesilicone.
Mikana yekukanda urethane haigumi, uye inoratidza kuva yakakwana yakaderera vhoriyamu mhinduro.
Polyurethane Vacuum Kukanda Zvikumbiro
Yakaderera Vhoriyamu Kugadzira / Ipfupi Kugadzirwa Kumhanya
The Vacuum Kudzingwa akakwana yepamusoro epurasitiki prototypes. Kana mavhoriyamu asingaruramise kudyara mujekiseni kuumbwa uye mapfupi ekumhanyisa zvikamu zvekugadzira, inogona kupedza vhiki pasati zvigadzirwa zvekugadzira zvagadzirira. Yedu yepamberi yekugadzira masevhisi anokubatsira iwe kugadzira tsika uye dzakaomarara zvigadzirwa zvikamu mumazana mashoma nekukurumidza kupfuura echinyakare tooling uye kuumbwa.
Injini Yekuongorora / Inoshanda Kuyedza
Iyo urethane yekukanda maitiro uye isingadhuri turu yekushandisa inosanganisirwa inoita kuti zvive nyore uye nehupfumi kune chero kunodiwa mainjiniya ongororo uye dhizaini shanduko. Pamusoro pezvo, izvi zvaizoshandiswa kuita bvunzo inoshanda usati waedza zvigadzirwa zvekugadzira uye kuburitsa mushumo kana kutowana kupihwa mvumo.
Aesthetic Models / Ruvara & Texture Zvidzidzo
Chikamu chekukanda chingave chakazara seteti yekushongedza modhi ine akasiyana mavara, mavara uye anopedzisa pasi pechero iro dhizaini dhizaini. Kana usina zano rekuti ndeupi muto unganyanya kukodzera chigadzirwa, unogona kugadzira silicone muforoma kuburitsa gumi nemashanu kukanda uye kupenda imwe neimwe neyako dhizaini mavara uye machira ekukurukura zvemukati panguva yekusangana pakati pemadhipatimendi ekugadzira kana kunyange misangano yekutungamira.
Kushambadzira Gadzirira / Ratidza Models
Kuguma-mushandisi mashandiro uye yemhando yepamusoro kupedzisa kunoita urethane cast zvikamu zvakanaka pakuongorora kwevatengi uye kuongorora kwevashandisi. Iko kushandiswa kweiyo cast urethane maitiro kunoreva kuti shanduko dzinogona kukurumidza kugadzirirwa kune kumwe kuyedzwa kana kutangisa kwemusika. Pane chero ratidziro dzekutengesa kana kuratidzira, unogona kuratidza zvidimbu zvakaenzanisirwa kune vatengi vanofarira. Urethane kuumbwa inodiwawo kumifananidzo mukugadzirira bhurocha rekambani kana kutumirwa pawebhusaiti yepamutemo kune vamwe vangangoita vatengi.
Cnc Rapid Prototyping, 3d Kudhinda & Rapid Prototyping Services, Kukurumidza Prototyping, Kurumidza Prototyping, Cnc Kuchengetedza, Inokurumidza Prototyping Uye Kugadzira,